Pero: Fanohintohinana ny zon’olombelona sy ny fahalalàhana miteny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jona 2009 17:23 GMT
Nanomboka tamin’ny nandravàn’ny mpitandro filaminana ny barazy natsangan’ireo zanatany [indizena] mba hanoherana lalàna iray (DL 1090) izay eritreretin’izy ireo ho mandika ny zony amin’ny tany navelan'ny razany ny fandatsahan-drà tany amin’ny tanàna Perovianan’i Bagua . Tsy fahafatesana sivily tsy fantatra isa mazava ( 10 no isa ofisialy, nefa araka ny loharano hafa dia manodidina ny 80 hatramin’ny 250 izany) sy mpitandro filaminana 23 ihany no naterak’ireny, fa niteraka diabe sy hetsika fanehoana firaisankina amin’ireo zanatany [indizena] manerana an’i Pero koa. Toa tsy manana afa-tsy valin-teny tokana monja ny ankabeazan’ireo Peroviana momba ny hoe iza no nahatonga ireo fahafatesana ireo: ny governemanta.
Ny hany setrin'izany avy amin’ny governemanta dia toa ny herisetra. Ohatra amin’izany, ny hetsika iray nataon’ireo mpianatra tany Lima ka nifandona tamina mpitandro filaminana mpandrava fihetsiketsehana maro tsy toy ny mahazatra izay nanaparitaka azy ireo tamina baomba mandatsa-dranomaso. Nambara ihany koa ireo tetika hanadiovana ampahan-dàlana iray (any Yurimaguas) amin’ny faran'ity herinandro ity, izay mbola sakanan’ireo mpanao fihetsiketsehana. Na dia nitafa tamin’ireo mpitarika ireo vondrom-piarahamonina indizena eny an-toerana aza ny governemanta, mbola matahotra fandatsahan-drà ihany ny maro.
Tsy maintsy nifikitra tamin’ny filazàna ofisialy momba ireo zava-nitranga ny haino aman-jery tranainy, indrindra tamin’ny nanombohan'ny zava-nitranga, ary izany no nahatonga ireo fampitam-baovao sosialy toy ny blaogy sy twitter (ampiasao ny teny fototra #bagua) ho lasa loharano voalohany momba ireo vaovao hafa. Na dia mitohy eny aza ny fandisoam-baovao goavana atao momba io tranga io, tsaratsara kokoa raha nitsimbadika ity raharaha ity.
Raharaha iray izay nampieritreritra momba ny andraikitry ny governemanta amin’ny fanapariahana ireny vaovao tsy ofisialy ireny ny fanakatonana ilay toby fampielezam-peo tao Bagua, La Voz de la Selva toa noho ny fanapariahana vaovao tsy marina. Efa namoaka filazàna momba ny tahotra ny mety hitrangan’izany ilay toby fampielezam-peo. Androany anefa, tanteraka ihany izany tahotra izany, izay avy hatrany dia niteraka hetsika fanoherana nataon’ireo mpanentana sy ireo avy amin'ny anjerimanontolo. Mikasa ny hanohitra ity fanakatonana ity koa ireo tompon’ilay toby fampielezam-peo. Nampiely ny fiampangan'ilay toby ny fampijaliana sy ny tsy fanajana ny zon’olombelona ny vohikala Enlace Nacional. Nanohitra ny fanafoanana ny fanomezan-toky nataon’ny governemanta koa izy, sy ny fandavàny hanaovana lanonam-panomezam-boninahitra ireo niharan’ny herisetra.
Zavatra hafa nampibaribary ny tsy fandeferan'ny governemanta koa ny fampihatoana mpikambana fito ao amin’ny kongresy izay naneho ny fanohanany ny vahoaka indizena. Farany, na dia nanambara aza ny governemanta fa hanokatra fifanakalozan-kevitra indray amin’ireo mpisolo tena ny indizena, dia mbola mandà kosa ny hampidirana ny AIDESEP izy, fikambanana izay misolo tena ny ankamaroan’ny vondrom-piarahamonina indizena any Pero, nefa koa voatoroka ho manone vàhana azy ireo. Nanohatra izany fanapahan-kevitra izany ny mpanelanelana avy amin'ny governemanta.
Amin’izao fotoana izao, tsy dia misy fanantenana loatra ny toe-javatra misy an’i Pero momba ny zon’olombelona sy ny fahalalahana miteny. Tsaratsara kokoa ny manaitra ny fiaraha-monina iraisam-pirenena, mba handefasan'izy ireo mpanara-maso sy hijerijereny ny fivoaran’ny zava-misy any Peru, alohan’ny hiharatsian’ny raharaha sy hisian'ny tranga iray mety hanenenan’ny firenena mandrakizay.
Fandikan-teny ho amin'ny anglisy avy amin'ny lahatsoratra fototra amin'ny teny espaniôla nataon'i Tom Schrieber.